राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल कहा कहा ताेकियाे ? - Maxon Khabar
Home / News / राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल कहा कहा ताेकियाे ?
राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदान स्थल कहा कहा ताेकियाे ?
२०७६ पुष ११ - आउदाे माघ ९ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि मतदान स्थल ताेक्ने काम सम्पन्न भएकाे छ । निर्वाचन आयोगले प्रदेश नं १ अन्तर्गत मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाको वीरेन्द्र सभागृहलाई मतदानस्थल तोकेको छ । सो केन्द्रमा ३६७ जना मतदाता रहेका छन् । आयोगले प्रदेश नं २ को मतदानस्थल जनकपुर उपमहानगरपालिकाको महेन्द्रनारायण स्मृति भवनलाई तोकिएको जनाएको छ ।
सो केन्द्रमा ३७९ जना मतदाता रहेका छन् । प्रदेश नं ३ को ललितपुर महानगरपालिकाको वडा समितिको भवन मतदानस्थल तोकिएको छ । सो केन्द्रमा ३४८ जना मतदाता रहेका छन् । गण्डकी प्रदेशको कास्कीको निर्वाचन कार्यालय पोखरा मतदानस्थल तोकिएको छ । सो केन्द्रमा २३० जना मतदाता रहेका छन् । प्रदेश नं ५ को दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाको कर्मचारी मिलन केन्द्रको भवन मतदानस्थल तोकिएको छ । सो केन्द्रमा ३०५ जना मतदाता रहेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय परिसरको भवन मतदानस्थल तोकिएको छ । सो केन्द्रमा १९८ जना मतदाता रहेका छन् । त्यसैगरी आयोगले सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटीको सिलगढी नगरपालिकाको पद्म पब्लिकमुक्ति नारायण उच्च मावि मतदानस्थल तोकेको छ । सो केन्द्रमा २२९ जना मतदाता रहेका छन् । सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभा सदस्यतर्फ ५५० र स्थानीय तहतर्फ अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रमुख र उपप्रमुख १ हजार ५०६ गरी कूल जम्मा २ हजार ५६ जना मतदाता रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।